Amasoso aqobayo, amajusi, ujamu nokunye ukudla nge-gelation kuyindlela ejwayelekile ekukhiqizeni ukudla oketshezi. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwama-pectin kanye noshukela wemvelo we-intracellular kusuka kwizithelo nemifino kuyindlela ephumelela kakhulu yokukhuthaza i-gelation yemikhiqizo yokudla ngaphandle kokungezwa ushukela ocwengekile. Ngaleyo ndlela, i-ultrasonication ayigcini ngokwandisa ukusebenza kahle kwezomnotho ngokunciphisa izindleko zokukhiqiza (njengoba ushukela nezithasiselo zokujiya kungadingeki), kepha futhi kusiza ukukhiqiza ukudla okunempilo, okunciphise ikhalori.
Ukuvuthwa nokuqina kwemikhiqizo yokudla
Ukulungiswa kwama-gel avela kwizithelo ezicebile ngama-pectin kuyinqubo esungulwe kabanzi yokukhiqizwa kwemikhiqizo yokudla ehlukahlukene kubandakanya amasoso, i-purees, i-ketchup, amajusi, ama-smoothies, ama-marmalade namajamu. Ukuqina nokuqina kokudla okunjalo kudinga ukungezwa kaningi ngoshukela ngamanani aphezulu ukufeza izinga elifunekayo le-gelation. Isidingo soshukela ocwengekile sidingeka kakhulu njengoba ama-pectin noshukela wemvelo ezithelweni nasemifino kufakwe kumatrix eselula amaseli ezitshalo, lapho ihlala ingasetshenziswanga kakhulu.
I-ultrasonicator I-UIP4000hdT iyinqubo yokudla enamandla engu-4kW yokukhiqiza ukudla kwezimboni njenge-pectin kanye ne-flavour extraction kanye ne-homogenization.
Isixazululo: Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwamaPectin namaSugar Emvelo
I-Ultrasonication ubuchwepheshe obusungulwe kahle futhi obusetshenziswa kabanzi ukukhipha ama-molecule we-bioactive ezitshalweni ezifana nezithelo nemifino. Ngakho-ke, i-sonication iyindlela ehlonishwayo ekusetshenzisweni kokudla njengokukhiqizwa kwamajusi, ama-smoothies, iziphuzo, amasosi, ama-purees, ama-ketchups, ukusabalala kwezithelo, amajamu nama-marmalade, lapho amagagasi e-ultrasound asiza khona ukukhipha ama-flavour compounds, pectins kanye noshukela (isib. fructose) kusuka kumatrix eselula entweni yesitshalo. Lokhu kusho ukuthi i-ultrasound ayikhuthazi nje kuphela ukufaka i-gelling, kodwa futhi yenza imikhiqizo yokudla ibe ne-flavour futhi ibe mnandi kakhulu ngaphandle kokufakwa kwama-flavour, ushukela nezinye izithasiselo. Ngesidingo esikhulayo sokudla okungokwemvelo, okwenziwe kancane, ukucutshungulwa kokudla kwe-ultrasonic ubuchwepheshe obulungele ukudala ukudla okunempilo nokunambitheka. Ukwelashwa kwe-Ultrasonic pectin yokudla kutholakale kuyisu lokulungiselela elisebenza kahle kakhulu, elinokwethenjelwa, lokonga amandla, nelokulungela imvelo, ikakhulukazi i-low-methoxyl pectin.
I-Pectin iyisithako esithandwayo kwimikhiqizo enoshukela ophansi nemikhiqizo yokudla enempilo ngenxa yezakhiwo zayo ezakha ijeli. Ngokusebenzisa imisebe ye-ultrasonic oketshezini olususelwa kwizithelo nemifino, ukwengezwa koshukela ocwengekile kungagwenywa noma kunciphiswe kakhulu, ngoba ukusebenza kwe-pectin kukhombisa izakhiwo ze-gelation oyifunayo futhi kunegalelo ezakhiweni ezithandekayo ze-rheological zomkhiqizo wokudla.
Izinzuzo ezingeziwe zokucubungula ukudla kwe-ultrasonic zifaka ukungasebenzi kwe-enzyme efana ne-pectin methylesterase kanye ne-homogenisation (ukuthungwa okubushelelezi) kanye ne-pasteurization (ukuzinza okuthuthukile kwamagciwane).
Izinzuzo ze-Ultrasonic Pectin Extraction and Gelation
Ayikho noma ngaphansi kwesengezo soshukela
Izithasiselo ezingekho noma ngaphansi
Imikhiqizo yokudla enempilo
Ezomnotho ezinenzuzo / ezonga imali
Ukufakwa okulula noma ukufaka kabusha i-retro
Icubungula umthamo wanoma iyiphi ivolumu
I-Ultrasonic pectin, ukunambitheka, kanye neshukela okususelwa ku-vegetal cell cell matrix isetshenziswe ngempumelelo kwizithelo zamawolintshi, amawolintshi, ulamula, ama-mangos, izithelo zothando, ama-apula, amapheya, amapentshisi, utamatisi nezinye izithelo nemifino eminingi.
Ungakugwema Kanjani Ukucekelwa phansi Kokwakheka Kwe-Pectin Yamangqamuzana
I-Ultrasonication ingakhuthaza kakhulu ukwakheka kwejel kwimikhiqizo yezithelo nemifino equkethe i-pectin. Kodwa-ke, ukwenziwa kwe-sonication ngokweqile, okusho ukwelashwa kwe-ultrasound ngamandla amakhulu noma isikhathi eside kakhulu, kungabhubhisa ukwakheka kwamangqamuzana we-pectin ngaleyo ndlela kwehlise ikhwalithi ye-gelation. I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngama-ultrasonicators e-state-of-the-art, avumela amasethingi wokusebenza ngqo, ukulawula nokuqapha inqubo yokukhipha i-pectin. Amasethingi afinyeleleka kalula, inketho yokusetha kabusha nokonga imingcele yokwelashwa kanye nerimothi ngokusebenzisa noma isiphi isiphequluli se-inthanethi iqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho ugcotshwa ngaphansi kwezimo ezifanele. Ngaphezu kwalokho, idatha yakho konke ukugijima kwe-ultrasonic irekhodwa ngokuzenzakalela ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi, ukuze yonke imishanguzo eyodwa ibhekwe futhi ibukezelwe ukuqinisekiswa kwekhwalithi kanye nokufeza Izenzo Zokukhiqiza Ezinhle (GMP).
Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala.
I-Ultrasonic inline processor yokwelashwa kwemikhiqizo yokudla, isb. Ukukhipha ama-pectin, flavour kanye nezithelo zikashukela.
Ama-Pectins emikhiqizweni yokudla
I-Pectin iyi-polysaccharide ekhona odongeni lweseli lwemifino nezithelo eziningi. Ama-pectin ayaziwa ngezindawo zawo ezimangazayo zokuqina nokuqina, okwenza ama-pectin abe isithasiselo esisetshenziswa kabanzi embonini yezokudla. Ngokwengeziwe, ama-pectin ayaziwa ngezindawo zawo ezizuzisayo zezempilo.
Ukukhiqizwa kwama-gel anezithelo noma imifino ekhombisa inani eliphakeme le-pectin akuyona inselelo ethile. Ukwengezwa koshukela kukhuthaza i-pectin gelling nge-low methoxyl (LM) pectin. Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwe-methoxyl ephansi (LM) pectin kudinga amanani aphakeme kakhulu kashukela ongeziwe (approx. 50 wt%). Ngakho-ke, ama-pectin aphansi we-methoxyl (LM) ahlangene namanani aphakeme kakhulu kashukela ongeziwe afaneleka kuphela kuma-dessert, ama-jam nama-marmelades.
Isibonelo, ama-enzyme i-polygalacturonases, i-pectin lyase, ne-pectin methyl esterase (PME) ayingxenye yeqembu lama-enzyme e-pectinolytic noma ama-pectinase, aqinisa izibopho ze-glycosidic zezinto zepectic. I-Ultrasonication isetshenziselwa ukuvimbela ama-enzyme afana ne-pectinases ukuze ithole imikhiqizo yokudla ezinzile. Funda kabanzi mayelana nokungasebenzi kwe-enzyme ye-ultrasonic!